DEG DEG: Real Madrid iyo Barcelona oo qoorta la isku galiyay….(El Calsico oo 3-jeer la ciyaari doono Bil gudaheed) – Gool FM
DEG DEG: Real Madrid iyo Barcelona oo qoorta la isku galiyay….(El Calsico oo 3-jeer la ciyaari doono Bil gudaheed)
Byare February 1, 2019
(Spain) 01 Feb 2019. Waxaa la soo saaray isku aadka afar dhammaadka Copa del Rey iyadoona qoorta la isku galiyay kooxaha Tunka wayn ee Real Madrid iy Barcelona.
Lugta hore iyo lugta labaad ayaa la kala ciyaari doonaa 6-da iyo 27-ka Feebaraayo. Iyadoona lagu hor mari doono Camp Nou.
Sheekadan ayaa ka dhigan in Barcelona iyo Real Madrid ay labo jeer ciyaari doonaan El Clasico afar maalmood gudahood, 27-ka Feebaraayo iyo 2-da Marso maadaama ay sidoo kale ku kulmayaan wareega 26-aad ee La Liga.
Barca iyo Madrid kuma aysan kulmin Copa del Rey tan iyo Final kii 2014 kolkaa ay Los Blancos ku adkaatay 2-1 waqtiga dheeriga kaddib gool cajiib ah uu u dhaliyay Gareth Bale.
Waxay noqneysaa kulankii sideedaad oo labada lug ee semi-final ay ciyaaraan labada kooxood, iyadoo kulankii ugu dambeeyay ee afar dhammaadka ay isku qabteen 2012/13 kolkaa ay Real Madrid ku adkaatay 4-2 isku cel celis labada lug.
RASMI: Isku Aadka Koobka Wayn ee Chan Cup oo la soo saaray....(Yaa lagu beegay Xulkeena Soomaaliya?)
DEG DEG: Dalka Qatar oo markii ugu horreysay ku guuleystay Asian Cup.....(Wiilka Soomaaliyeed ee Akram Cafiif oo 3-da Goolba lugtiisa uga shaqeeyay)+DAAWO MUUQAAL